16 Buttons Qalabka birta ah oo aan fiicnayn ayaa lagu rakibay Mashruuca Golaha Shirkada-News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
16 Buttons Fure Key oo aan Xabbad Laheyn oo Lagu rakibay Mashruuca Golaha Sare ee Parcel
Waqtiga: 2020-08-19 Hits: 47
Nidaamka golaha wasiirada ee sirdoonka, oo ay ku jiraan kumbuyuutarrada warshadaha, oo kuxiran a 16 Buttons Furaha Aan Birta lahayn ee Birta, Scanner aaladda QR, shaashadda taabashada, daabacaadda QR code, guddiga kontaroolada elektaroonigga ah, server; guddiga xakameynta qufulka elektiroonigga ah waxaa lagu rakibay golaha wasiirada Qufulka elektiroonigga ah wuxuu ku xiran yahay, serverku wuxuu ku xiran yahay kombuyuutarka WEB kombuyutarka ama taleefanka gacanta ee APP.
Waa maxay sababta loo habeeyey kabadhyo badan oo kaniisad ah oo la isticmaalay?
1. Jooji dhoofinta badan ee ay keenaan kuwa qaata, iyo wanaajinta tayada gaarsiinta shirkadaha wax iibsada.
2. Sirta gaarka ah iyo badbaadada shaqsiyeed ee soo diraha iyo qaataha waa la ilaaliyaa, waana ku haboona in soo diraha iyo aqbalaha ay u diraan una soo qaadaan waqti kasta.
3. Isticmaalayaasha si ku meelgaar ah u keydsan kara alaabada aan ku habooneyn inay qaadaan markay ku safrayaan golahan caqliga badan, wayna ka qaadi karaan markay munaasib tahay.
4. Isticmaalayaashu uma baahna inay khadka tooska ka galaan si ay u galaan oo ay lacag u bixiyaan. Waxay bixin karaan amarro waxayna ku bixin karaan kombiyuutarka WEB ama taleefanka gacanta ee APP, iyagoo ka fogaanaya dhibaatada ciriiriga.
5.Guddiga dhammeystirka ee dirista, qeybinta iyo helitaanka, macluumaadka dirayaha iyo aqbaleha waxaa had iyo jeer lagu keydiyaa qaab QR code, kaasoo runtii ka fogaanaya soo bixitaanka macluumaadka isticmaaleyaasha isla markaana kordhiya hufnaanta gaarsiinta iyo qaadista.
Sidee ku saabsan "Xianglong Keypad"
Furayaashu waa xardhan yihiin leysarka, sidaa darteed furayaashu si tartiib tartiib ah uguma tirtiri doonaan si tartiib-tartiib ah waqtiga dheer aawadood.
Gudida iyo badhamadu waxay ka kooban yihiin 304 steel oo aan tayo lahayn, oo leh awood ka hortag burbur leh.
Nolosha adeegga ≥ 2 milyan jeer
Furaha furaha waa IP67-biyaha, ka hortagga-qodista, iyo ka-hortagidda.
Hore: 4x4 16 fureyaasha rada macdanta birta ah Lagu buuxiyay Qalabka Mashiinka Moobaylka
Xiga: Maxay tahay sababta xabsigu u baddalayaan booqashooyinka iyagoo wata wicitaanno fiidiyoow ah?